Waxaan si qalad ah tirtiray oo dhan photos dhalashadiisa wiilkii aan wax yar ayaa ka card SD aan telefoonka ee, 4G, waxa uu Windows phone 7. Ma jiraa hab kasta oo aan soo kaban karto, iyaga? Waxay ka dhigan tahay badan haddii Ma i caawin kartaa si aad uga hesho dib. Thanks ka hor.
Photos diiwaan daqiiqado macno leh iyo xusuus dhammaaday. Haddii aad lumay qaar ka mid ah, news weyn waa in dhammaan sawiro aad ku kaydsan yihiin kaarka SD ah, kaarka xogta gudaha ma aad telefoonka ee, taas oo macnaheedu yahay aad fursad fiican u heystaan ​​inay ka soo kabsadaan iyaga.
Marka aad siin ah "tirtirto" amarka ah ee aad taleefan, kaliya tahay aad sixitaanka goobta kaarka SD in lagu qabtay sawiradaada "maran", in si kale loo dhigo, oo loogu talagalay photos / data cusub oo ay ku overwrite jir ah. Taas macnaheedu waxa weeye, in alla inta aad ee aan ku badbaadi wax files cusub in kaarka SD ka dib markii khasaaraha, waxaad soo kaban kartaa sawiro tirtiray ka kaarka telefoonka 7 Windows SD la software soo kabashada.
Sidee inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka Windows 8 phone
Ka hor inta wax kale samayn, heli phone 7 Windows qalab soo kabashada marka hore. Haddii aad qabto wax fikrad ah kama, halkan aan soo jeediyo: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac . Waa software xirfadeed iyo dareen leh oo awood u siiyaa in aad ka bogsato photos tirtiray, videos iyo music ka Windows 7 telefoonka, iyo sidoo kale telefoonada gacanta kale HTC, Samsung, LG, Blackberry, Motorola iyo in ka badan. Waxaad buuxin kartaa hawsha dib u soo kabashada oo dhan 3 tallaabo la dhibaatana ma leh.
Download version maxkamad free of Windows phone 7 software kabashada sawirka hoos ku hadda.
Step1. Connect aad Windows phone 7 ilaa kombiyuutarka
Waxaad si toos ah xirmaan kartaa Windows phone 7 ilaa computer la cable ah digital, ama qaadato oo ka mid card SD oo ku xirmaan akhristaha kaarka. Labada iyaga shaqeeyaan. Kaliya u hubso waxa lagu ogaan karaa oo u muuqdaan sida warqad drive ah. Markaas ordi barnaamijka oo ay bilaabaan in ay "Start" Windows phone 7 kabashada.
Step2. Sawirka photos tirtiray aad Windows phone 8
Halkan, waxaad wici ama kaarka SD waxaa la ogaan doonaa oo u muuqan. Waxaa Dooro oo guji "Scan" si aad u hesho sawiro tirtiray waxa on. Waxaad kala miiri karaa natiijada scan oo isticmaalaya "Filter Options", haddii aad rabto oo kaliya in la helo sawiro.
Step3. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan sawirada tirtiray phone8 Windows
Marka scan ka istaago, waxaad ku eegaan karaan dhamaan sawirada halkan ka hor soo kabashada si loo hubiyo tayada. Markaas calaamadee kuwa aad rabto oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday aad Windows phone 7 ama kaadhka xusuusta. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Video tutorial ee Windows Phone 8 Recovery
> Resource > Windows > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka Windows Phone 8